Sina Carbon fibre carbonnel mampifandray roa fantsom-pandrosoana sy orinasa | Yan Tuo
Fantsona karbôna mampifandray roa fantsona
Fantatsika rehetra fa tsy azo atao ny mihodina ny fantsom-bozaka karbaona miaraka amin'ny teknolojia fanodinana nentim-paharazana, satria hanimba ny firafitry ny fibre carbon. Ka ny sisiny roa dia soloina ampahany aluminium. Na ampiasao resina sy lakaoly hampifamatotra ireo tapany fibre karbaona voadidy ao amin'ilay fantsona fibre carbon original.
3K Mamirapiratra / Matte / raha ilaina
Kitapo taratasy, sombin-javatra, kitapo fanerena avo
500mm * 58mm * 78mm Araka ny takiana
5000 Pieces Isam-bolana
Fibre karbaona miorina amin'ny polyacrylonitrile
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny vokatra
Fantatsika rehetra fa tsy azo atao ny mihodina ny fantsom-bozaka karbaona miaraka amin'ny teknolojia fanodinana nentim-paharazana, satria hanimba ny firafitry ny fibre carbon. Ka ny sisiny roa dia soloina ampahany aluminium. Na ampiasao resina sy lakaoly hampifamatotra ireo tapany fibre karbaona voadidy ao amin'ilay fantsona fibre carbon original. Ny fanaovana izany dia hahavery be ny fahombiazan'ny fantsona fibre karbaona, ary hihena be ny henjana sy ny fihenjana. Mba hamahana ity olana ity dia manandrana mampiasa fomba famolavolana machining izahay mba hamoronana mpampitohy fibre karbonika tanteraka. Taorian'ny andrana maro dia nahita fomba famokarana milamina ihany izahay tamin'ny farany. Farany dia tsapanay ny fampifangaroana ny fantsona mampifandray ny fibre carbon. Ny toetra ara-batana sy simika an'ny fantsona dia nihatsara be
Tontolo iainana azo ampiharina amin'ny vokatra
1.Mampifandray ny ampahany amin'ny fitaovana lehibe
2.Telo lalana mampifandray fantsona ho an'ny fantsom-pitaterana
3.Military fitaovana, fitaovana fitsaboana, faritra aerospace fitaovana
1. Tanjaka avo lenta: ny tanjaky ny fibre karbonika dia 8-10 heny noho ny vy, matetika ambonin'ny 3500mpa, ary ny fahombiazana tena tsara dia mety hahatratra 5000mpa.
2. Low density sy mavesatra maivana, ny hakitroka dia 1/4 fotsiny amin'ny vy.
Ny fantsom-pitrandrahana karbaona dia manana tombony amin'ny tanjaka avo, fiainana lava, fanoherana ny harafesina ary lanja maivana. Ampiasaina be izy io amin'ny vokatra toy ny papango, fiaramanidina modely fiaramanidina, tohana isan-karazany, zana-kazo fitaovana, fitaovana mandeha ho azy, milina fanoratana, fantsom-pahasalamana, fitaovana fanatanjahan-tena sns. Andiana fananana tena tsara toa ny fahamarinan-toerana, ny fitondra herinaratra, ny fitondra hafanana, ny coefficient fanitarana hafanana ambany, ny fanosorana tena, ny fidiran'ny angovo ary ny fanoherana ny hatairana. Ary manana ny toetra mampiavaka ny modulus avo lenta, fanoherana ny havizanana, fanoherana ny fikororohana, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny fitafiana sns.
Teo aloha: 3K PlainTwill Weave Carbon Fiber Sheet
8000mm Halava ID200mm Od204mm Carbon Fiber Tube
hazo teleskaopy fibre karbaona ho an'ny fanadiovana varavarankely ...
Fantsona fibre karbaona ho fanaingoana
Taratry ny takelaka fibre karbonika